I-Rising Sun Izithombe 'UThomas Maher Usiza Abaculi Abancane Baphendule Ukudlula Kwabo Emisebenzini - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Rising Sun Izithombe 'UThomas Maher Usiza Abaculi Abancane Baphendukele Okudlondlobala Kwabo Ngemisebenzi
I-Rising Sun Izithombe 'UThomas Maher Usiza Abaculi Abancane Baphendukele Okudlondlobala Kwabo Ngemisebenzi
Lapho eseqede uhlelo lweSitifiketi Seziqu Zesikole ngokwakhe, Maher uletha uhlobo olukhethekile lwentshiseko ekilasini.
I-Adelaide, eSouth Australia — UThomas Maher uyilungu elincane kunabo bonke labasebenzi bokufundisa eRising Sun Photos Education. Umdabu wase-Adelaide ngokwakhe ungumdidiyeli walolu hlelo, eseqede iSitifiketi Sokuphothula Izibalo Zamandla e-Dynamic kanye ne-Lighting e-2017, wethulwe ngokubambisana neRising Sun Pictures (RSP) ne-University of South Australia (UniSA). Ngemuva kokuthola isipiliyoni somculi njengomculi esitolo se-Adelaide VFX shop Resin, futhi efundisa izisekelo zeHoudini nezaseNuke kwa-TAFE, uTom wabuyela ku-RSP ngonyaka odlule. Kusukela lapho, usebenze njengomsizi wokufundisa kuDan Wills ezifundweni zeSitifiketi seGraduate in Dynamic Effects and Lighting kanye namakilasi afundiswa ngokubambisana ekuhlanganiseni, Paint naseRoto nakwezinye izifundo. Ubuye futhi wasebenza njengomdwebi esitudiyo kumafilimu amaningana kubandakanya ne-blockbuster hit UCaptain Marvel.
UTom usekhombise ukuthandwa phakathi kwabafundi ngokwazi kwakhe uHoudini, ukukwazi ukwenza imiqondo enzima ibonakale ilula, nomdlandla awulethela ekilasini. Naye, umangele ngabaculi abafisa ukuhlangana nabo ekilasini. Uthi: “Ngisebenze ngamakilasi ahlukene amane futhi cishe wonke umfundi udlula lokho engikulindele. “Baqhubeka bangihlaba umxhwele ngekhono labo lobuciko kanye nejubane abakwaziyo ukufunda nokusebenzisa izinto esizifundisayo. Banobungane obukhulu, bavuthiwe futhi banekhono. ”
Njengabafundi bakhe abaningi, uTom wahlabeka umxhwele ngemiphumela ebonakalayo evela ekubukeni ama-movie esemncane. Wenza amafilimu amafushane esikoleni esiphakeme futhi wathola ukuqeqeshwa ngokusemthethweni e-University of Adelaide naseTAFE SA, wagcina etholile iDiploma ye-Advanced in Screen neMedia.
Ngesikhathi ngisafunda eTAFE, uTom wenza izifundo ezimbili ezimfishane ezifunda iHoudini kwa-RSP. Ujabulele lesi sipiliyoni kangangokuba wabhalisa ohlelweni lweSitifiketi seGraduate ngemuva kokuphothula iziqu zakhe. Ukhethe ukugxila ekufundeni kahle uHoudini ezifundweni ezibhekiswe kwiDynamic ukusebenza kanye nokukhanyisa futhi uchaza isipiliyoni njengomshintshi womdlalo. Akuzange kumsize nje kuphela ukuthatha amakhono akhe ukuba afike ezingeni elisha, kwamfundisa nokuthi angaguqula kanjani inkanuko yakhe ibe umsebenzi obonakalayo, wokuphila konke.
Uthi: “Kwakumnandi. “Kusukela ngangena, ngezwa sengathi angisiyena umfundi nje, kodwa ngiyilungu leqembu. Abasebenzi basebenze kanzima ukusenza sizizwe samukelekile. Abaculi abasuka phansi, ababengeyona ingxenye yabasebenzi bezemfundo, babezokwehla basize usizo nempendulo ngomsebenzi wethu. Kwakunamandla, isikhathi esigcwele, izinsuku ezinhlanu ngesonto. Kwakumnandi ukuba sesimweni lapho ungakha khona amandla. ”
Ngemuva kokuphothula uhlelo lweSitifiketi Sokuphothula Iziqu, uTom wachitha izinyanga ezimbalwa ethumela ama-reels futhi eqhubeka futhi futhi exoxisana nokuthola imisebenzi, ngaphambi kokuthi umngane amncome ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumculi osemncane eResin. Indima yakhe ngokuyinhloko yayihilela ukuqamba nokwenza i-rotoscoping, kodwa futhi wayenethuba lokusebenzisa amakhono akhe weHoudini ukudala imiphumela yamanzi yochungechunge lweNetflix Tidelands.
Ngemuva kwesikhashana ngemuva kokuqala eResin, uTom wanikezwa umsebenzi wesibili, efundisa uHoudini esikoleni sakhe sangaphambili, iTAFE. Wathola isipiliyoni simnandi kakhulu njengoba umsebenzi wakhe esiteji sabaculi. Uyakhumbula: “Bengihlala ngikuthanda ukufundisa. "Bekulomsebenzi onzima, kepha bengikuthanda, ikakhulukazi njengoba kuhilela uHoudini, iphuzu lami elikhulu engilithandayo."
Mid ngonyaka owedlule, kwavulwa isikhundla sokusiza umsizi e-RSP. U-Anna Hodge, ophethe uhlelo, wacabanga ngoTom, ayemazi bobabili kusukela ngesikhathi sakhe e-RSP nase-TAFE. Wagxumela ethubeni lokuthi abuye. Uthi: “Kwakungathi, 'Yebo!' "Kwakumangaza ukubuyela eRSP futhi ngibe ngaphesheya kwedeski."
Akumangazi ukuthi uTom uqhubekile kahle nabafundi bakhe. Mdala kakhulu kunabaculi abancane asekilasini lakhe, futhi, njengoba esanda kudlula kulolu hlelo uqobo, uthola kulula ukubona ngezinkinga zabo kanye nokunqoba kwabo. Uyaphawula: “Sekuyiminyaka emibili kuphela ngiqale umsebenzi wami wokuqala futhi ngashintsha kusuka kumfundi ngaya kwezobuciko nothisha oqeqeshiwe,” kuphawula. “Isimo somkhakha asikashintshi kakhulu. Uma uthumela izinhlelo, awuhlali uzizwa zibuya. Kungakudumaza, kepha kufanele uqhubeke nokuthuthukisa amakhono akho uphinde usebenzise futhi. Leyonto ngifunde kanzima ngakho-ke ngaluleka abafundi bami ukuthi babekezele futhi baphikelele. Ngibakhuthaza futhi ukuthi basebenzise yonke izinsiza eziqashwa yi-RSP. ”
Ngaphandle kokunamathela kukho, uTom weluleka abafundi bakhe ukuthi bacabange isikhathi eside futhi kanzima ngekusasa labo. "Cabanga ukuthi iyiphi indima ongathanda ukuyilandela ku-VFX," egcizelela. “Ekuqaleni, zonke zingabonakala zifana, kodwa ziholela ezindleleni ezihluke kakhulu zomsebenzi. Uma inhliziyo yakho izimisele ekugcineni ukuba umqambi, isibonelo, thola ukuthi yiziphi izindima eziholela kuyo, njengokupenda n roto, futhi usebenze ukuthuthukisa lawo makhono. Uma ungaqiniseki ukuthi ufuna ukuphelela kuphi, thatha inkambo eyisisekelo nakho konke okuncane, noma ubone ongakufunda ekhaya. Cishe uzofunda ngokushesha ongakuthandi nokuthi uthando lwakho lukuphi. Uzoba nombono ongcono ngalokho okuhle okwenzayo futhi ulungele kangcono umsebenzi othuthukile.
“Uma uthandela imiphumela yokubuka, njengoba nami ngenza, kufanele uyenze. Akukaze kube nesikhathi esingcono sokuba ngumculi wethonya elibonakalayo, e-Adelaide nasemhlabeni jikelele. ”
Isitudiyo sethu sijabulela inzuzo yokuba se-Adelaide, eSouth Australia, elinye lamadolobha aphumelela kakhulu emhlabeni. Lokho, kuhlanganiswe nedumela lethu elihle, nokufinyelela kwesinye sezaphulelo ezinkulu kunazo zonke futhi ezinokwethenjelwa, kwenza i-RSP ibe yizibuthe kubenzi befilimu emhlabeni wonke. Lokhu kusicelele ukuthi siqhubeke nempumelelo futhi senze i-RSP ukuthi ifake isandla ezinhlelweni ezahlukahlukene kufaka phakathi iSpider-Man: Ipulazi Elivela Ekhaya, uCaptain Marvel, Dumbo, Alita: I-Battle Angel, i-Predator, iTomb Raider, uPeter Rabbit, i-Animal World, iTor: I-Ragnarok, Logan, Pan, i-X-Men franchise kanye ne-Game of Thrones.
Izithombe ze-Rising Sun ziphinda zisebenzise isithonjana se-Auto racing se- "Ford v Ferrari" - Novemba 25, 2019
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Imfundo I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-COLONIE / Chicago ukuqeqeshwa I-TVU Izinethiwekhi VFX Imiphumela Ebonakalayo	2019-10-08
Ngaphambilini: I-Life Church Ikhetha Izindlu ze-VITEC Zokukhulekelwa Kwezindlela Zokuxazulula
Olandelayo: Ngaphakathi, Ukukhiqiza # 514-20